मृत्युलाई जितेका डा.गैरे भन्छन् : कोरोना केही होइन भनेर अफवाह नफैलाऔँ
शिलापत्र - काठमाडौँ
समय ठीक चलेको हुन्थ्यो भने वीर अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा.ध्रुव गैरे सेतो एप्रोन अनि काँधमा स्टेथेस्कोप भिरेर बिरामीको उपचार गरिरहेका हुन्थे ।
समय ठीक विपरीत चलेको छ । बिरामीको उपचार गर्ने उनी आफैँ थलिएका छन् । कारण– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) । कोरोना संक्रमणले अन्तिम अवस्थामा पुगेका डा.गैरेले नयाँ जीवन पाएका छन् । तर अझै शरीर थिरमा चलेको छैन । अक्सिजनको सहारामा श्वास फेरिरहेका छन् ।
कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त थियो । जो कोहीलाई जति बेला पनि संक्रमण हुन सक्थ्यो । डा.गैरेले आफैँ कोरोनाको शिकार हुनुपर्छ भनेर सोचेका पनि थिएनन् र संक्रमितको उपचारमा दिनरात खटिनुपर्छ भन्ने थियो । देशको कुनाकन्दराबाट वीर अस्पतालमा बिरामी आइपुग्छन् । अस्पतालमा बिरामीको चाप थियो । कहिले ओपीडी त कहिले राउन्ड । शैय्यामा छटपटाइरहेका आर्तहरू । उनी बिरामीकै सेवामा खटिएका थिए ।
एकाएक खानाको स्वाद हरायो । पखाला लाग्यो । वान्ता हुन थाल्यो । ज्वरोले समात्यो । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दाे लक्षण छ । डा. गेरै तर्सिए । वीर अस्पतालमै उनले २० साउनमा पीसीआरका लागि स्वाब दिए । उनले जे नसोचेका थिए, त्यही रिपोर्ट आयो- कोरोना पोजिटिभ ।
प्रकाशित मिति: : 2020-09-21 12:35:45
सिला खोजेर फुर्माइसी
बाह्रखरी - काठमाडौँ
बालुवाटारमा सामन्त : बुढेसकालमा माताजीसँग…
अनलाइनखबर - काठमाडौँ
सेतोपाटी - काठमाडौँ
दशैंमा टीका थाप्दा लाग्थ्यो – छोरी भएर जन्मिएको भए ...
लोकान्तर - काठमाडौँ
मृत्युलाई नजिकबाट देखें, धेरै प्रेरणा लिएर घर फर्किएँ
बा, म राजनीति गर्छु [कथा]
नेपाल लाइभ - काठमाडौँ
असफल सरकार र कोरोनाका बीच बडादसैं
प्रेम राज पाण्डे - मुम्बई
लोप हुँदै तराइको सांस्कृतिक चलन
उमाशङ्कर द्विवेदी‘दधीचि’ - वीरगञ्ज
आइपुग्ने छैन अब दसैंको बाडुली
अधिकारको नाममा किन दशैँको विरोध?
नवीन रायमाझी - न्यूयाेर्क
वाइडेनलाई ट्रम्पको जवाफः अमेरिकामा कसैलाई बस्नु छ भने देशको कानुन नमान्ने छुट छैन
अमेरिकाका नेपाली : को डेमोक्रेट्स, को रिपब्लिकन अनि को ट्रम्पकन ?
प्रदीप भटराई - अमेरिका
कर्णालीको अविश्वास ल्याउन माधव नेपालसँग सम्बन्धित केन्द्रदेखि तलसम्मका नेताहरु सामेल थिए: यामलाल कँडेल (अन्तर्वार्ता, भिडियाेसहित)